INTSHA ENTSHA yeSitudiyo Condo! - I-Airbnb
INTSHA ENTSHA yeSitudiyo Condo!
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguMaria
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMaria iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
ENTSHA KRACA!! Isitudiyo seCondo yanamhlanje esinazo zonke izinto eziluncedo! IGated, uKhuseleko lweeyure ezingama-24 kunye nemarike yokutya kwindawo enzima! Izithuthi zikawonke-wonke ekunene kwikona yesakhiwo kunye ne-15-20mins ukuya kumbindi wesixeko. Ukuba ukhetha iMetro, isikhululo esitsha kunye nomgca zisandula kuvulwa kufutshane. I-balcony enkulu kunye neendawo zokupaka ezitratweni zasimahla!
Isitudiyo esitsha esivulekileyo esinekhitshi eligcweleyo kunye nomatshini wokuhlamba okwiyunithi. Iyunithi yekona yomgangatho wokuqala enendawo eninzi kunye nemibono eluhlaza. Sinemarike yokutya kanye kwipropathi entsonkothileyo enayo yonke into onokuyidinga ngokuhlala kwakho. Luluntu olunesango elinokhuseleko lweyure ezingama-24. Intendelezo encinci yaba bantwana okanye ukuhlala emva kosuku olude. Ukuba ungathanda ubumfihlo obuthe kratya, mhlawumbi ibalcony enkulu ngokufanelekileyo kwaye esecaleni.
Ikhompleksi ejolise kusapho kwindawo ephuhlayo.
Iya kufumaneka ngefowuni / i-imeyile, kodwa iya kushiya ulwazi kwigumbi ukwenza ukuhlala kwakho kuphumelele! Xa ndisedolophini, ndiza kuba phezu kwakho nje kumgangatho wesithathu wesakhiwo ukuze ndincedise ngayo nayiphi na indlela endinokuyenza ngayo.
Iya kufumaneka ngefowuni / i-imeyile, kodwa iya kushiya ulwazi kwigumbi ukwenza ukuhlala kwakho kuphumelele! Xa ndisedolophini, ndiza kuba phezu kwakho nje kumgangatho wesithathu w…